Ahama Steel taabashada strips, naxaas taabashada silsilado, strips Bronze taabashada - JBP
Waxaan nahay shirkad laan ka mid ah CO JBP GROUP (HK) a., XADDIDAN. Iyada oo waayo-aragnimo ka badan 16 sano hodan ku ah samaynta tilmaamayaasha dusha dhulka taabashada iyo alaabooyinka kale ee CNC biraha machined. Suuqa ugu weyn ee aan la socday iyada oo Australia, New Zealand, Japan, USA, Germany, France iyo dalal kale oo Yurub ah. Waxaan waxaa la siiyaa qalab horumarsan iyo shaqaalaha our farsamo aqoon hubisaa noo heerka R sare & awoodda D.
Waxyaabaha ka mid ah waxyaabaha aannu ka mid ah: Marine Fasalka ahama, naxaas ah, copper, aluminium, waxaaga zinc iyo caag deegaanka-friendly oo caag ah.
ku badan yihiin ee our warshad been sida soo socota:
1, Waxaan leenahay 16 sano oo waayo-aragnimo qani ah ee soo saarta qaybo bir ah la hogaaminaya R & D awoodda. Our suuqyada waaweyn yihiin Europe, North America, Australia iyo Asia. Waxaan ku siin karnaa waxyaabaha tayada iyadoo la raacayo shuruucda iyo xeerarka degaanka.
2, Annagu waxaannu ku kaashanaya dhowr shirkado xoog muddo sanado ah. Waxaa jira in ka badan 20 sano farsamo soo maray kuwaas oo si fiican u ogaato oo ku saabsan alaabta. Saasaana idiin xaqiijin karaa in aan awoodno si ay ugu deeqdo alaabta oo tayo leh oo ku salaysan bixinta si degdeg ah.
3, The injineerada u qalma in our warshad soo jeedin karaan waana idiin Naseexayn, waayo qaar ka mid ah mashaariicda cusub ee loogu talagalay haddii loo baahdo. Waxaan ku fiican yihiin naqshadaynta iyo sidoo ogaato oo ku saabsan codsiga ah ee waxyaabaha ugu muhiimsan.
4, Waxaan leenahay liisanka dejinta iyo dhoofinta.
5, Waxaa jira daraasiin deggan-qandaraaslayaasha sub yaa inaga siiyaan qaar ka mid ah waxyaabaha ka qalab kale.
Our warshad ku taalla Cixi, dhammaadkiisa koonfureed ee Hangzhou Bay Bridge, kuwaas oo buundada ugu dheer badda ku. Waa mid ka mid ah iyo nus saac ka Airport Pudong iyo 1 saac ka Airport Xiaoshan, nus saac ka Airport Ningbo in warshad our baabuur oo keliya. Haddii aad soo socda inuu na soo booqato, fadlan nala soo xiriir si soo gaaray.
Haddii aad qabto su'aal kasta, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriir.
TGSI-010 ahama birta silsilado taabashada / warnin ...
TGSI-018 ahama birta taabashada strip / directi ...
TGSI-006 ahama silsilado taabashada birta / warni ...
qaybo ka mid caag / qaybo ka mid caag doorsoon / wax taaj oo kale ru ...